ပြည်သူ့စစ်စခန်းကို KIA ဝင်ပစ်၊ တဦးဒဏ်ရာရ | ဧရာဝတီ
နန်းသီရိလွင်| January 7, 2013 | Hits:5,246
9 | | ကချင် ပြည်နယ် မိုးညှင်းမြို့နယ် နမ့်မွန်း ကျေးရွာ အုပ်စုရှိ ကျေးရွာ ကာကွယ်ရေး ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ စခန်းကို ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA) က ၀င်ရောက် ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ လူတဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) တပ်ဖွဲ့ဝင်များ (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
KIA ၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျေးရွာ ပြည်သူ့စစ် အဖွဲ့ဝင် ဦးသက်ခိုင်ဦး၊ အသက် ၄၂ နှစ်၏ ဘယ်ဘက် ခြေသလုံးနှင့် ညာဘက် ပေါင်တို့တွင် ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ပြီး မိုးညှင်းမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ တင်ပို့ထားရကြောင်း ဒေသခံတဦးက ပြောသည်။
“ပြည်သူ့စစ်က ၇ ယောက်ပဲ ရှိတာ။ မနက် စောစော ပစ်သံ ခတ်သံတွေ ကြားရတော့ ဆွမ်းပို့တဲ့သူ၊ ဈေးသွားရမယ့် သူတွေ တောင် လန့်ပြီး မသွားကြတော့ဘူး။ ပြည်သူ့ စစ်စခန်းက ရွာထဲတင်ဆိုတော့ ကြောက်ကြတာပေါ့” ဟု နမ့်မွန်း ကျေးရွာသား တဦးက ဆိုသည်။
၀င်ရောက်ပစ်ခတ်သည့် KIA အင်အားမှာ ၃၀ ခန့်ရှိနိုင်ပြီး နမ့်မွန်း ကျေးရွာတွင် ရဲစခန်းနှင့် စစ်တပ် မရှိသည့် အတွက် အင်အား ၇ ဦးသာ ရှိသည့် ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကိုသာ အားကိုးနေရကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
ပစ်ခတ်မှုမှာ မနက် ၄ နာရီကျော်ခန့်မှ ၅ နာရီခန့်ထိ ဖြစ်ပြီး နံနက် ၁၀ နာရီခန့်တွင် မိုးညှင်းမြို့နယ် တပ်ရင်း ၁၅ မှ ကျေးရွာ လုံခြုံရေး အတွက် ရောက်ရှိလာကြောင်း သိရသည်။
“ကျနော်တို့ ဘာမှ လုပ်မပေးနိုင်ပါဘူး။ စုံစမ်း စစ်ဆေး တင်ပြတာပဲ လုပ်နိုင်တယ်။ ရဲစခန်းက တင်လာတဲ့ သတင်းလောက်ပဲ ကျနော်တို့ ရပါတယ်” ဟု မိုးညှင်းမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူ တဦးက ပြောသည်။
နမ့်မွန်းကျေးရွာ အုပ်စုသည် အိမ်ခြေ ၂၀၀၀ နီးပါး ရှိကာ ရှမ်း၊ ဗမာနှင့် ကချင်လူမျိုးများ ရောနှော နေထိုင်ကြကြောင်း၊ ၎င်းသည် မိုးညှင်းမြို့နှင့် ၁၈ မိုင် အကွာတွင် တည်ရှိကြောင်း၊ အနီးဆုံး အစိုးရ တပ်စခန်းသည် ၁၁ မိုင် အကွာရှိ လုံးတုံ တပ်စခန်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“တခါမှလည်း မကြုံဘူးတော့ အားလုံး လန့်သွားတာပေါ့။ ပစ်သံ ခတ်သံဆိုတာ ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းကပဲ ကြားဖူးခဲ့တာ။ မကြုံဘူးတာ ကြာတော့ လန့်နေကြတယ်။ ရွာက ကျောင်းတွေလည်း နေ့လည် ၂ နာရီလောက်မှာ အားလုံး ဆင်းပေး လိုက်တယ်။ ကျနော်တို့ ကတော့ ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ ပြည်သူ့စစ်အတွက် ဆေးဖိုး ဘာညာ ထောက်ပံ့ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်” ဟု ပါရမီ နမ့်မွန်း လူမှု ကူညီရေး အသင်းမှ ကိုငယ်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့ ခရစ္စမတ်နေ့က နမ့်မွန်းကျေးရွာသား ၃ ဦးကို KIA က ခေါ်ဆောင်သွားပြီး ယခု အချိန်ထိ ပြန်လွှတ်ပေးခြင်း မရှိသေးကြောင်း၊ ၎င်း ရွာသား ၃ ဦးကို ပြန်လည် ခေါ်ယူနိုင်ရေးအတွက် ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီတို့က KIA ကို တောင်းဆိုထားသော်လည်း တစုံတရာ ကြောင်းပြန်ခြင်း မရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။
အစိုးရနှင့် KIA အကြား ဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ပွဲများကြောင့် ကချင်တိုင်းရင်းသားများ သာမက ကချင်ပြည်နယ်တွင် နေထိုင်သည့် ရှမ်း တိုင်းရင်းသားများနှင့် တခြားတိုင်းရင်းသား ပြည်သူများပါ အတိဒုက္ခရောက်နေစေကြောင်း၊ KIA တပ်ဖွဲ့ ၀င်များသည် မီးရထားလမ်းများ၊ လမ်းတံတားများကို ဗုံးဖောက်ခွဲခြင်း၊ ဆက်ကြေးကောက်ခြင်း၊ စစ်သားအဖြစ် အဓမ္မ လူစုဆောင်းခြင်း အစရှိသည့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ ကျူးလွန်နေကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် စစ်ပွဲများ ရပ်ရန်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် အမြန်ဆုံး ဆွေးနွေး အဖြေရှာ ပေးရန် တိုင်းလိုင် (ရှမ်းနီ) အမျိုးသားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီက ၂၀၁၂ ခု၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်စွဲဖြင့် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေသည့် တနှစ်ကျော် အတွင်း အစိုးရ၏ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော် မတီနှင့် KIA တွေ့ဆုံမှု ၁၁ ကြိမ်ထိ ရှိခဲ့သော်လည်း သဘောတူညီချက် မရရှိဘဲ ၁၂ ကြိမ်မြောက် တွေ့ဆုံရန် ညှိနှိုင်းနေစဉ် ၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာနှင့် ၂၀၁၃ ဇန်န၀ါရီလ အတွင်း မြန်မာ အစိုးရ တပ်မတော်က လေကြောင်းပစ်ကူ၍ KIA တို့၏ တောင်ကုန်း အမှတ် ၇၇၁ ကို သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment thihamin January 7, 2013 - 8:58 pm	KIA/KIOမှ ဒူးဝါးလနန်သို့ –
ရဲဘော်တွေကို မဖြစ်စလောက်ကိစ္စတွေ လိုက်မလုပ်ခိုင်းပါနဲ့ အဖွဲ့အစည်း ဂုဏ်သိက္ခာကျ ဆင်းပါတယ်။ ပိုင်ရင် မြစ်ကြီးနားကို ၀င်သိမ်းပါ။ ကျနော်လည်း မြို့(ရေးမြို့)သိမ်းတိုက်ပွဲ ပါခဲ့ ဘူးပါတယ်။ ထင်သလောက် မခက်ပါဘူး။
(လူထုကကိုယ့်ဘက်က အပြည့်ရှိပေမဲ့ ကိုယ့်ဘက်က သောက်သုံးမကျတဲ့ အစီအမံကြောင့် မရ ခဲ့ပါဘူး။)
Reply	Than Naing January 7, 2013 - 9:40 pm	Thanks your updated news all.
Reply	အောင်အောင် January 7, 2013 - 9:54 pm	kia ဘက်တော်သား အပေါင်းတို့ ခင်ဗျား မည်ကဲ့သို့ သော မှတ်ချက်များ ပေးကြပါမည်နည်း ခင်ဗျား။
Reply	rain January 9, 2013 - 9:51 pm	ဒိနေ၇ာကျသူတို့ နှာစေးနေကြလို့ ပါဗျာ စစ်တပ်က စခန်းတခုသိမ်းပြိး၇င်တော့အသံထွက်လာမှာပါ လူ့ အခွင့်အရေးချိုးတာတွေကြိးနိုင်ငယ်ညှင်းတာတွေ ခက်တော့ခက်သား အပြစ်မဲ့ ပြိးမြေဇာပင်ဖြစ်နေတဲ့ကိုယ့်လိုပြည်သူတွေ ဒိလို နိပ်စက်တာကျ kiaအပြစ်မ၇ှိတော့ဘူးလား ငြိမ်းချမ်းေ၇းကိုတောင်းဆိုတာအမှန်လား kiaလုပ်သမျှထောက်ခံတာအမှန်လားးး
Reply	Shwe Yoe January 8, 2013 - 6:26 am	Please! Please! Do not continue hatred to rule over us. Attacking poor militia who are forced to act like soldiers will not help. Fightingagood fight will give you honor but attacking poorly armed militia will make you idiot.
Reply	မမ January 8, 2013 - 2:47 pm	ကလေးကလားဆန်တဲ့လုပ်ရပ်တွေများများလုပ်ရင်တော့KIAအမြန်ကျဆုံးမှာဘဲ။
Reply	လဆိုင်း January 8, 2013 - 9:14 pm	ကေအိုင်အေက သတ္တိရှိရင် စစ်တပ်ရဲ့ စခန်းတွေကို တိုက်ခိုက်ပါ။မဆိုင်တဲ့အရာတွေကို မတိုက်ခိုက်ပါနဲ့။ကေအိုင်အေ ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်း မေးကြည့်ကြပါ။ငါတို့ လက်အောက် ငယ်သားတွေကိုလည်း တကယ်တန်ဖိုးထားလား၊ မိမိတို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေပဲ ကြီးပွားတိုးတက်ချမ်းသာအောင် ကြံဆောင်နေတာလား၊ တကယ် ကချင်ပြည်နယ်ကလူထု အတွက်လား ကွဲကွဲပြားပြားသိအောင် ကြိုးစားပြီး စုံစမ်းစေချင်ပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်မှာ နေတဲ့ ပြည်သူ လူထုကိုကြီးပွားအောင်မလုပ်ပေးချင်နေပါစေ ဒုက္ခမပေးပါနဲ့လို့ ပြောချင်ပါတယ်။